Banyere Anyị - Ningbo YINZHOU DONGAO anwụ Nkedo CO., LTD
Ebe ọ bụ na a na-tọrọ ntọala na 2006, anyị na ụlọ ọrụ a pụrụ iche na ndị R & D na n'ichepụta nke aluminum alloy na zinc alloy ngwaahịa. Company na-emi odude ke Yinzhou district, Ningbo obodo, Zhejiang n'ógbè. Ekpuchi ebe dị ihe dị 13.500 square mita, na-ewu ebe dị ihe dị ka 10,000 square mita.
Anyị nwere 7 nkeji nke 160T ka 800T oyi ulo anwụ nēfe igwe, na 3 nkeji nke 50T ka 168T ọkụ ulo anwụ nēfe ígwè ọrụ. More karịa 20 nkeji nke machining emmepe na CNC lathes, 2sets nke ultrasonic ihicha e. Otu uzuzu mkpuchi mmepụta akara. More karịa 50sets nile di iche iche nke n'ibu nhazi equipments. Dị ka egwu igwe, shot ọgbụgba ọkụ igwe, polishing igwe, vibration mills na na. Anyị na-enwe di iche iche nke elu ule ngwá, dị ka CMM, spectrometer, na pneumatic atụ ihe wdg
Anyị na ngwaahịa na-exported na Europe na n'ebe ugwu America. -Bụ-eji na ulo oru ngwá, akpakanamde, ọgwụ ubi na aerospace ọdụ n'akụkụ. Ọtụtụ n'ime anyị na ndị ahịa na-OEM.
N'ime afọ, echiche nke a na-commited inye mpi ngwaahịa na ọrụ ndị ahịa bụ anyị ume ozi, na "Iguzosi ike n'ezi, Innovation, Professional, Win-mmeri" bụ anyị isi ụkpụrụ. Ịdabere na nkà mmụta sayensị, nkà na ụzụ ọhụrụ, na enweta na esịtidem nwere, ifịk ifịk mụbaa ahịa, ịzụlite ọhụrụ ngwaahịa. Mgbe afọ nke mgbalị, anyị ụlọ ọrụ emewo ndibọhọ mmara ọtụtụ ama anụ ụlọ na ná mba ọzọ ụlọ ọrụ. N'ihi ya, anyị ụlọ ọrụ nwere ike mepụtara nọgidere, ike na stably.
Okwu: Shangcheng Village, Tangxi Town, Yinzhou district, Ningbo, China